Princess Cruises Emerald Princess waxay ku soo laabanaysaa adeegga Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Princess Cruises Emerald Princess waxay ku soo laabanaysaa adeegga Mareykanka
Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Princess Cruises Emerald Princess waxay ku soo laabanaysaa adeegga Mareykanka.
Doomaha Princess Cruises ee saaran doonida Emerald Princess ayaa diyaar u ah martida helay qaddarkoodii ugu dambeeyay ee tallaalka COVID-19 ee la ansixiyay ugu yaraan 14 maalmood kahor bilowga safarka oo haysta caddeyn tallaal.
Marti -sharaftii ugu horreysay ee Amiirad Emerald ayaa shaqaalaha ku soo dhoweeyeen xaflad gaar ah oo goynta xadhigga.
Princess Emerald ayaa loo qorsheeyay inay timaado Ft. Lauderdale Oktoobar 30, 2021 waxayna ka shiraacan doontaa 10 maalmood oo safarro Canal Panama ah, oo ka soo wareegaysa Ft. Lauderdale ilaa Diseembar 2021.
Tallaalada shaqaalaha Emerald Princess waxay waafaqsan yihiin tilmaamaha CDC.
Ka soo shiraacanaya Dekedda Los Angeles oo saaran 15 maalmood oo ah Canal Cruise Cruise, Emerald Princess waxay ku soo laabanaysaa adeegga waxayna soo dhaweynaysaa martidii ugu horraysay.
Princess Emerald waxay bixisaa Fasaxyada MedallionClass, gaarsiinta ugu dambaysa ee dadaal la’aanta, socdaalka shaqsiyeed. Medallion-ku waa aalad afar-meelood meel ah, oo la gashan karo oo awood u siineysa wax walba laga bilaabo fuulitaanka taabashada-la'aanta ah si loo helo kuwa aad jeceshahay meel kasta oo markabka ah, iyo sidoo kale adeeg la wanaajiyay sida lahaanshaha wax kasta oo martidu u baahan tahay, si toos ah loogu geeyo, meel kasta oo ay ku sugan yihiin markabka. Waxaa loo aqoonsaday inuu yahay aaladda ugu horumarsan ee la gashan karo ee warshadaha martigelinta adduunka.
Gacan-goyska Princess Doonyaha saaran Doonta Emerald Princess ayaa diyaar u ah martida helay qaddarkoodii ugu dambeeyay ee tallaalka COVID-19 ee la ansixiyay ugu yaraan 14 maalmood ka hor bilowga safarka oo haysta caddaynta tallaalka. Dhammaan martida si buuxda loo tallaaley waa inay sidoo kale soo saaraan tijaabo COVID-19 (PCR ama antigen) oo caafimaad ahaan la fiiriyey oo la qaaday laba maalmood gudahood markii ay soo galeen dhammaan dhoofyada Princess. Tallaalada kooxdu waxay waafaqsan yihiin tilmaamaha CDC.
Gacan-goyska Princess waa khadadka dalxiiska caalamiga ah ee saafiga ah iyo shirkad dalxiis oo ka hawl gasha 14 doonyood oo casri ah oo xamuul ah, oo qaada laba milyan oo marti sannad walba 380 goobood oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Kariibiyaanka, Alaska, Canalka Panama, Meksiko Riviera, Yurub, Koonfurta Ameerika, Australia/ New Zealand, South Pacific, Hawaii, Asia, Canada/New England, Antarctica, iyo World Cruises.